မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်အစိုးရ အထူးကိုယ်စားလှယ် Pornpimol Kanchanalak
မြန်မာဆိုင်ရာ ထိုင်းအထူးကိုယ်စားလှယ် ပထမဆုံး ခန့်လိုက်တာက ထူးခြားပြီး၊ အာဆီယံ ဘုံသဘောတူချက်ဖော်ဆောင်ဖို့ အခက်ကြုံနေချိန် ကြားက ကူပေးနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
တခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေထက် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပိုနီးစပ် ချိတ်ဆက်မူတွေရှိနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာ့အရေး ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ပြီးသား Ms Pornpimol Kanchanalak ကို တနင်္လာနေ့က အခုလို ခန့်လိုက်တာကြောင့် ဆက်ဆံရေးပို ချောမွေ့လာနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ထောက်ပြကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေမှာတောင် အားလုံးနဲ့ လက်ခံတွေ့ဆုံညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ သံတမန်ရေး ကျွမ်းကျင်မူကလည်း မြန်မာအကြပ်အတည်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း ဒီစောင့်ကြည့်လေ့လာနေသူတွေက ဆိုပါတယ်။ ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်း အထူးကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်တဲ့အတွက် ထူးခြားတဲ့အနေအထားကို မေးမြန်းရာမှာ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဦးမိုးဇော်ဦး က
ဦးမိုးဇော်ဦး ။. ။ အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်တယ်ဆိုတာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ တွေ့ဖူးကြုံဖူးတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အာဆီယံနိုင်ငံ တနိုင်ငံကနေ အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်တယ်ဆိုတာ နည်းနည်းထူးဆန်းနေတာပေါ့။ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ရဲ့ အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာပြည်သွားရောက်ပြီး ပြန်လာတဲ့အခါမှာ ဒီလိုမျိုး အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်တာကို သတိထားမိတယ်။ နောက်တခါ အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာ ခန့်အပ်တာဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုပြီးတော့ တိုးမြှင့်တဲ့အခါမှာလည်း အာဆီယံရဲ့ကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားမလို အားမရဖြစ်တယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဘာကြောင့် အားမလို အားမရဖြစ်ရတာလဲလို့ မေးရာမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆူလာလောင်ကွန်း တက္ကသိုလ်မှာ အရှေ့တောင် အာရှဆိုင်ရာဘွဲ့ ယူခဲ့တဲ့ ဦးမိုးဇော်ဦး က ဆက်ပြီး
ဦးမိုဇော်ဦး ။. ။ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့က နယ်စပ်ကလည်း တော်တော်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆက်စပ်နေတာဖြစ်တယ်။ တခြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး ဆက်စပ်မှုတွေလည်း ရှိတယ်။ အခုဆိုရင် နယ်စပ်မှာ စစ်ရေး ပဋိပက္ခတွေလည်းရှိတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာအရေးမှာ ပိုပြီးတော့ ဆက်စပ်ပတ်သက်မှုတွေများတယ်။ အဲဒီအတွက် ဒါထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုအထူးသံနဲ့ ခင်မင်တဲ့သူ ဒေါက်တာ ဖုန်းဝင်း ကလည်း
ဒေါက်တာဖုန်းဝင်း ။. ။ ဒီလိုခန့်လိုက်တာကတော့ ထူးလည်း ထူးခြားတယ်။ ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ်။ အရင်ကတော့ ဝန်ကြီးအဆင့်နဲ့ ဟိုဖက်ဒီဖက် ဆက်ဆံချင် ဆက်ဆံ နှစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အဆင့် ဆက်ဆံကြတယ်။ အခုကြားထဲကနေ အထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ဆက်ဆံမယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ ပိုပြီးတော့ သွက်လက်လာမယ်ထင်တယ်လေ။ ပြီးတော့ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာအနေနဲ့ကလည်း အိမ်နီးချင်းကောင်းတွေ၊ ပြီးတော့ ထိုင်းနဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ အခြေနေတူတာတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အကြောင်းကော၊ မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်းကော တော်တော်နားလည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ထိုင်းဖက်ကနေ အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့် ကောင်းရာ ကောင်းကြိုးဆက်ပြီးတော့ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကော မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကော ကောင်းပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အဲဒီတော့ ရှေ့ဖြစ်လာမယ်အနေအထားတွေကိုမေးရာမှာ ဦးမိုးဇော်ဦး က
ဦးမိုဇော်ဦး ။. ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ သူပြောထားတဲ့ထဲပါတာက တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါမှာလည်း တာဝန်ပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာ သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့။ တဆက်တည်းမှာလည်း အမေရိကန် နဲ့ အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင် ခန့်အပ်တာဖြစ်တာကြောင့် အမေရိကန်နဲ့လည်း တစုံတရာ ဆက်စပ်နေမယ်လို့လည်း ယူဆရပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒေါက်တာ ဖုန်းဝင်း ကလည်း
ဒေါက်တာ ဖုန်းဝင်း ။. ။ မြန်မာပြည်အကြောင်းသေသေချာချာသိတယ်လူတယောက်လို့ ရွေးတယ်ထင်တယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်က ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ တော်တော်လေး ထိတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ ခန့်အပ်လိုက်တာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ကတော့ အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပုံစံ၊ အမေရိကန်ပုံစံ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံတယ်။ လက်ခံတယ်။ ကောင်းကောင်းစကားပြောတယ်။ ဒါတွေက သူတို့နိုင်ငံရဲ့သံတမန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီအတိုင်းပဲ အထူးသံကိုယ်စားလှယ်က လုပ်ခဲ့တာရှိတာပေါ့။ ပြည်သူလူထုဖက်က ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဖက်က နားထောင်ပြီးတော့ သူတို့က အခြေအနေတခုကို အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ အာဆီယံကိစ္စမပြေမလည်ဖြစ်နေတာကို ကြားဝင်ပြောပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ မြန်မာနိုင်ငံက မတည်မငြိမ်မှုတွေကို အများဆုံး ခံစားရတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးအခြေအနေတွေ ပိုစိုးရိမ်လာတာကို အခုခန့်အပ်မှုက ပြလိုက်တာလို့ သုံးသပ်သူတွေက ဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
ထိုငျးအထူးသံ မွနျမာ့အရေးဆောငျရှကျနိုငျမယျ့ အလားအးလာ
မွနျမာဆိုငျရာ ထိုငျးအထူးကိုယျစားလှယျ ပထမဆုံး ခနျ့လိုကျတာက ထူးခွားပွီး၊ အာဆီယံ ဘုံသဘောတူခကျြဖျောဆောငျဖို့ အခကျကွုံနခြေိနျ ကွားက ကူပေးနိုငျတယျလို့ သုံးသပျသူတှကေ ဆိုပါတယျ။
တခွားအာဆီယံနိုငျငံတှထေကျ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ပိုနီးစပျ ခြိတျဆကျမူတှရှေိနတေဲ့ ထိုငျးနိုငျငံအနနေဲ့ မွနျမာ့အရေး ထဲထဲဝငျဝငျ ပါဝငျပွီးသား Ms Pornpimol Kanchanalak ကို တနင်ျလာနကေ့ အခုလို ခနျ့လိုကျတာကွောငျ့ ဆကျဆံရေးပို ခြောမှလေ့ာနိုငျတယျလို့ သုံးသပျသူတှကေ ထောကျပွကွပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ အခကျခဲဆုံးအခြိနျတှမှောတောငျ အားလုံးနဲ့ လကျခံတှဆေုံ့ညှိနှိုငျး ဖွရှေငျးတတျတဲ့ သံတမနျရေး ကြှမျးကငျြမူကလညျး မွနျမာအကွပျအတညျးအတှကျ အထောကျအကူဖွဈနိုငျတယျလို့လညျး ဒီစောငျ့ကွညျ့လလေ့ာနသေူတှကေ ဆိုပါတယျ။ ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ထိုငျးနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး က မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျး အထူးကိုယျစားလှယျ ခနျ့အပျတဲ့အတှကျ ထူးခွားတဲ့အနအေထားကို မေးမွနျးရာမှာ အမြိုးသား ညီညှတျရေးအစိုးရ NUG ဦးမိုးဇျောဦး က
ဦးမိုးဇျောဦး ။. ။ အထူးကိုယျစားလှယျခနျ့တယျဆိုတာ အနောကျနိုငျငံတှမှောတော့ တှဖေူ့းကွုံဖူးတယျပေါ့။ ဒါပမေယျ့ အာဆီယံနိုငျငံ တနိုငျငံကနေ အထူးကိုယျစားလှယျခနျ့တယျဆိုတာ နညျးနညျးထူးဆနျးနတောပေါ့။ အထူးသဖွငျ့ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံ ရဲ့ အာဆီယံ အထူးကိုယျစားလှယျ မွနျမာပွညျသှားရောကျပွီး ပွနျလာတဲ့အခါမှာ ဒီလိုမြိုး အထူးကိုယျစားလှယျခနျ့တာကို သတိထားမိတယျ။ နောကျတခါ အာဆီယံထိပျသီးဆှေးနှေးပှဲမတိုငျခငျမှာ ခနျ့အပျတာဖွဈတယျ။ အဲဒီတော့ ထိုငျးနိုငျငံအနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ဆကျဆံရေးကို ပိုမိုပွီးတော့ တိုးမွှငျ့တဲ့အခါမှာလညျး အာဆီယံရဲ့ကွိုးပနျးဆောငျရှကျခကျြနဲ့ ပတျသကျပွီး အားမလို အားမရဖွဈတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဘာကွောငျ့ အားမလို အားမရဖွဈရတာလဲလို့ မေးရာမှာ ထိုငျးနိုငျငံ ဆူလာလောငျကှနျး တက်ကသိုလျမှာ အရှတေ့ောငျ အာရှဆိုငျရာဘှဲ့ ယူခဲ့တဲ့ ဦးမိုးဇျောဦး က ဆကျပွီး
ဦးမိုဇျောဦး ။. ။ ထိုငျးနိုငျငံနဲ့က နယျစပျကလညျး တျောတျောကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ဆကျစပျနတောဖွဈတယျ။ တခွားနယျစပျကုနျသှယျရေး၊ စီးပှားရေး ဆကျစပျမှုတှလေညျး ရှိတယျ။ အခုဆိုရငျ နယျစပျမှာ စဈရေး ပဋိပက်ခတှလေညျးရှိတယျ။ အာဆီယံနိုငျငံတှထေဲမှာ ထိုငျးနိုငျငံက မွနျမာအရေးမှာ ပိုပွီးတော့ ဆကျစပျပတျသကျမှုတှမြေားတယျ။ အဲဒီအတှကျ ဒါထကျ ပိုမိုလုပျဆောငျဖို့လိုအပျနတေယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုအထူးသံနဲ့ ခငျမငျတဲ့သူ ဒေါကျတာ ဖုနျးဝငျး ကလညျး
ဒေါကျတာဖုနျးဝငျး ။. ။ ဒီလိုခနျ့လိုကျတာကတော့ ထူးလညျး ထူးခွားတယျ။ ကောငျးလညျးကောငျးပါတယျ။ အရငျကတော့ ဝနျကွီးအဆငျ့နဲ့ ဟိုဖကျဒီဖကျ ဆကျဆံခငျြ ဆကျဆံ နှဈနိုငျငံ သံအမတျကွီး အဆငျ့ ဆကျဆံကွတယျ။ အခုကွားထဲကနေ အထူးကိုယျစားလှယျအနနေဲ့ ဆကျဆံမယျဆိုတဲ့အခါကွတော့ ပိုပွီးတော့ သှကျလကျလာမယျထငျတယျလေ။ ပွီးတော့ ထိုငျးနဲ့ မွနျမာအနနေဲ့ကလညျး အိမျနီးခငျြးကောငျးတှေ၊ ပွီးတော့ ထိုငျးနဲ့ ကနြျောတို့နဲ့ အခွနေတေူတာတှလေညျး အမြားကွီးရှိတယျ။ ထိုငျးနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ကတော့ မွနျမာနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန အကွောငျးကော၊ မွနျမာနိုငျငံ အကွောငျးကော တျောတျောနားလညျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ထိုငျးဖကျကနေ အထူးကိုယျစားလှယျခနျ့ ကောငျးရာ ကောငျးကွိုးဆကျပွီးတော့ လုပျမယျဆိုရငျတော့ မွနျမာနိုငျငံအတှကျကော မွနျမာပွညျသူတှအေတှကျကော ကောငျးပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အဲဒီတော့ ရှဖွေ့ဈလာမယျအနအေထားတှကေိုမေးရာမှာ ဦးမိုးဇျောဦး က
ဦးမိုဇျောဦး ။. ။ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ဆကျဆံတဲ့အခါမှာ သူပွောထားတဲ့ထဲပါတာက တခွားပုဂ်ဂိုလျတှေ၊ အဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ထိတှတေဲ့အခါမှာလညျး တာဝနျပေးမယျလို့ပွောထားပါတယျ။ တခွားနိုငျငံတကာ အဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ဆောငျရှကျဖို့ အစီအစဉျရှိတယျဆိုတာ သုံးသပျလို့ရတာပေါ့။ တဆကျတညျးမှာလညျး အမရေိကနျ နဲ့ အာဆီယံထိပျသီးဆှေးနှေးပှဲမတိုငျခငျ ခနျ့အပျတာဖွဈတာကွောငျ့ အမရေိကနျနဲ့လညျး တစုံတရာ ဆကျစပျနမေယျလို့လညျး ယူဆရပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒေါကျတာ ဖုနျးဝငျး ကလညျး
ဒေါကျတာ ဖုနျးဝငျး ။. ။ မွနျမာပွညျအကွောငျးသသေခြောခြာသိတယျလူတယောကျလို့ ရှေးတယျထငျတယျ။ ပွီးတော့ မွနျမာပွညျက ပွညျသူလူထုတှနေဲ့ တျောတျောလေး ထိတှခေဲ့ဘူးတယျဆိုတော့ ခနျ့အပျလိုကျတာပါ။ ထိုငျးနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ကတော့ အထူးသဖွငျ့ အနောကျနိုငျငံတှရေဲ့ပုံစံ၊ အမရေိကနျပုံစံ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဆကျဆံတယျ။ လကျခံတယျ။ ကောငျးကောငျးစကားပွောတယျ။ ဒါတှကေ သူတို့နိုငျငံရဲ့သံတမနျရေးရာ ကြှမျးကငျြမှုဖွဈတယျ။ ဆိုတော့ အဲဒီအတိုငျးပဲ အထူးသံကိုယျစားလှယျက လုပျခဲ့တာရှိတာပေါ့။ ပွညျသူလူထုဖကျက ဒီမိုကရစေီအငျအားစုတှဖေကျက နားထောငျပွီးတော့ သူတို့က အခွအေနတေခုကို အကောငျးဆုံးလုပျပေးနိုငျမယျထငျပါတယျ။ အာဆီယံကိစ်စမပွမေလညျဖွဈနတောကို ကွားဝငျပွောပေးမယျလို့ထငျပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ မွနျမာနိုငျငံက မတညျမငွိမျမှုတှကေို အမြားဆုံး ခံစားရတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံအနနေဲ့ မွနျမာစဈအာဏာသိမျးပွီးအခွအေနတှေေ ပိုစိုးရိမျလာတာကို အခုခနျ့အပျမှုက ပွလိုကျတာလို့ သုံးသပျသူတှကေ ဆိုနပေါတယျခငျဗြာ။
မြန်မာဆိုင်ရာ ထိုင်းအထူးကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်
ချင်းမိုင်ကောင်စစ်ဝန်ရုံး စစ်ရေးအရအသုံးချဟု စွပ်စွဲချက် ကန်ငြင်းဆန်
လွတ်ရက်စေ့ မြန်မာအကျဉ်းသားတွေကို ထိုင်းလွှဲပြောင်းပေး